> Resource> DVD> Olee Ọkụ TV Gosiri na DVD - Live TV Series ndekọ
Dị ka ọtụtụ ndị, m hụrụ n'anya TV. Na-emekarị, m idekọ TV na-egosi na kọmputa m. Ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, m na ibudata TV na-egosi site na Internet. Na oge na-aga, a ogologo ndepụta nke TV na-egosi collection bụ n'ebe ahụ. Mgbe ahụ archiving TV na-egosi dị mkpa. N'oge a, m aways ahọrọ ọkụ ọkacha mmasị m TV-egosi na DVD n'ihi na ogologo oge ichebe na-azọpụta ndị ọzọ ohere nchekwa. Ọfọn, ma ọ bụrụ na ị na-enwe nza nke TV na-egosi na na kọmputa na wanna ọkụ TV na-egosi na DVD na na na obere DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ na ala ụgbọ ala gị si n'oche azụ DVD ọkpụkpọ, ị bụ kechioma ebe a. Aga m ịkọrọ m ahụmahụ na isiokwu a, na-egosi unu Olee otú iji tọghata TV na-egosi na DVD ọsọ ọsọ na mfe.
Ọtụtụ DVD ọkụ software pụrụ ime nke a ọrụ. Otú ọ dị, ebe a, m ga-nwere ike ikwu Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac). Ọ bụ ihe dị mfe iji ma dị ike DVD onye. Ọ dịkarịa ala, ihe abụọ mere ka ọ ghọọ onye na ezigbo nhọrọ. Akpa, ị nwere ike ire TV usoro jidesie otu DVD na mfe navigation menu. Na menu, ị nwere ike ozugbo gaa chọrọ nwunye site na ịpị kpọmkwem ọnụ ọgụgụ na n'ime ime obodo. Nke abụọ, ị nwekwara ike ịgbakwunye ọkacha mmasị gị TV show akwụkwọ ịma ọkwa na isiokwu song dị ka ndabere foto na music.
Ma na nke a TV na-egosi na DVD burner akwado Windows 2003 / XP / Vista / Windows 7, ọbụna Windows 8. (N'ihi na Mac, ọ bụ dị na Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6)
1 Import gị TV na-egosi n'ime nke a ngwa
Lauch uku a TV na-egosi na DVD Ntụgharị, na mbubata gị TV faịlụ a usoro. Dị na-eji onye ọ bụla n'ime atọ doable ụzọ:
See "+ Import" button ịchọta TV na-egosi faịlụ na ị chọrọ ma tinye ha.
Pịa-acha anụnụ anụnụ gburugburu bọtịnụ na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke a window, na-ahọrọ "Tinye Files ..." nhọrọ mbubata TV faịlụ.
Chọta gị TV na-egosi faịlụ na kọmputa mbụ, mgbe ahụ ịdọrọ ha a usoro ekpe ebi ndụ.
Cheta na: Odokwara video usoro a na-eji ngwa ekpe ebi ndụ dị ka play iji. Bụrụ na ọ bụghị, i kwesịrị pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala nke a window ịgbanwe ya. Ọzọkwa, ị pụrụ pịa "Tinye aha" button ịgbakwunye aha ọhụrụ jikwaa ọ bụla TV na nwunye.
Chọta DVD menu template ị chọrọ na menu window. Mgbe ahụ, hazie ya site na-agbakwụnye thumbnails, buttons, ederede, n'okirikiri / image wdg ịhụchalụ finial utịp ke "Preview" window. Ọ bụrụ na e nwere ihe ị na-adịghị ọdịnaya na, dị nnọọ laghachi eme ya ọzọ.
Rịba ama: Ọ bụrụ na e nweghị DVD menu template ị chọrọ, ị dị nnọọ see green ala akụ akara ngosi na ya họrọ otu n'ime ndị ọzọ free DVD menu ndebiri online.
3 Ọkụ TV-egosi na DVD
Ịtụle size gị TV na-egosi bụ nnọọ nnukwu, ị ga-mma fanye a ide DVD 9 diski maka ojiji. N'ezie, ọ bụrụ na ị fanye a DVD 5, a na ngwa ga-akpaghị aka mpikota onu ha ka ha dabara DVD diski. See "Ọkụ" taabụ, họrọ "Ọkụ ka diski" nhọrọ, wee pịa "Ọkụ" button. Ugbu a, a ngwa ga-eme ndị ọzọ ihe unu.
Ihe i nwere ike na-enweta site Wondershare DVD burner:
Enwe ọzọ mgbe ị chọrọ. Karịsịa ndị kasị mma na tiivi, na-ekiri otu oge dị anya n'ebe ezu.
Watch Gosiri na elu àgwà. DVD nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ikike karịa CD, otú i nwere ike ịzọpụta ọzọ elu àgwà TV-egosi na DVD.
Hapụ Space na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na ibu TV Fans, ị ihichapụ TV na-egosi nanị mgbe ị nwere. Ọkụ na tiivi ka DVD na Save ohere ugbu a!
Save Ego. I nwere ike ịzụta TV Gosi DVD na ahịa. Ma, gịnị mere na-emefu ndị a ego ma ọ bụrụ i nwere ike inwe elu ruo eru TV na-egosi DVD for free.
Olee otú iji tọghata na Ọkụ keynote ka DVD